राष्ट्रकवि घिमिरेलाई शिला स्रष्टा सम्मान - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौंः राष्ट्रकवि माधव घिमिरेलाई वि.सं २०७५ को मदन शिला स्रष्टा सम्मान अर्पण गरिएको छ ।
मदन–शिला प्रतिष्ठानद्वारा स्थापित सो पुरस्कारको राशि एक लाख एक हजारसहित सम्मानपत्र रहेको छ ।
यसैगरी प्रतिष्ठानले सोही वर्षको साहित्यिक पत्रकारिता पुरस्कार उन्ननय र दियालो साहित्यिक पत्रिकारलाई प्रदान गरियो ।
ती पुरस्कारको राशि ५० हजारसहित सम्मानपत्र रहेको छ । नेपाली साहित्यिक सम्मेलन दार्जलिङको मुखपत्रका रुपमा त्रैमासिकरुपमा दियालो प्रकाशन हुँदै आएको छ । यसका प्रधानसम्पादक नेपाली साहित्यिक सम्मेलन दार्जलिङका अध्यक्ष डा. चन्द्रकुमार राई छन् ।
राष्ट्रकवि घिमिरेले सरकारले आफू बिरामी पर्दा निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइ दिएकोमा धन्यवाद दिए ।
शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीले ती व्यक्तित्वलाई पुरस्कार अर्पण गर्दै आफूले राष्ट्रकविबाट साहित्य रचना सिकेको स्मरण गरे। नेपाली भाषा र संस्कृतिको क्षेत्रमा धेरै अन्वेषण बाँकी रहेको उनले बताए ।
प्रतिष्ठानका अध्यक्ष प्रा.डा. वासुदेव त्रिपाठीले राष्ट्रकवि घिमिरेलाई प्रतिष्ठानले पुरस्कृत गर्न पाएकोमा खुशी व्यक्त गरे ।
ट्याग्स: माधव घिमिरे